U tixraacaya erayga raadinta ee lambar bilaash ah
Raadinta Beddelka SEO-ga ee Taleefanka
Axad, Juun 11, 2010 Talaado, Disembar 18, 2012 Douglas Karr
Waxaan ku faraxsanahay inaan helno macmiil cusub bishan oo suuqgeyn ballaaran ka sameeya warbaahinta dhaqameed. Raadiyaha, telefishanka iyo boostada tooska ah, habka caadiga ah ee loola socdo olole waa iyada oo la siinayo lambarka tigidhada ama nambarka sicir-dhimista ee toos ula xiriira dalabka.
Si kastaba ha noqotee, ganacsiyada leh waaxda telemarketing ee soo galaya, habka ugu muhiimsan ee loo isticmaalo ayaa ah in lagu iibsado bangiyada nambarada taleefanka ee bilaashka ah oo ay u adeegsadaan lambar taleefan oo kala duwan olole kasta. Daraasadihii ugu dambeeyay waxay muujiyeen in boqolkiiba sare ee booqdayaasha websaydhku soo wici doonaan halkii ay shirkad kula xiriiri lahaayeen foom ama emayl (40% raadinta maxaliga ah).
Macmiilkani wuxuu leeyahay joogitaan websaydh ah waxaanan horeyba u kordhinay booqashooyinka boggooda hal erey oo key ah 15% wax kayar 30 maalmood. Kordhinta booqashooyinka waa wax fiican, laakiin waxaan u baahanahay inaan awoodno inaan ku tilmaamno taraafikada is-beddelka dhabta ah. Macaamiilkeennu waa inuu garwaaqsadaa in kharashka ku-habboonaynta mashiinka raadinta uu ku darayo doolar khadka hoose. Xalku waa in la guursado labada hanaan… habeynta mashiinka wax lagu raadiyo oo lagu tilmaamo mid gaar ah lambarrada bilaashka ah.
Tags: raad raadinwicitaanadalambarrada taleefannada firfircoontelefoonka raadraacaayna search engineSEO
Samee Aaminaad adigoo leh MAYA!
Jul 12, 2010 markay ahayd 8:11 AM
Doug, waan ogahay shirkad leh hal lambar taleefan oo keliya laakiin waxay ku dareysaa mid fudud "Weydiiso Amy" ama "Weydiiso Jim" lambarka taleefankooda bilaashka ah ee lagu dhajiyo. Ma jiraan Amy ama Jim shirkaddu laakiin markay jawaabaan waxay dhagaystaan ​​oo keliya magaca ay dadku weydiistaan ​​ka dibna ay dhahaan isagu / iyadu halkan ma joogo hadda laakiin waan ku caawin karaa. Sida iska cad magaca ayaa tilmaamaya ololaha dadku u jawaabayaan.
Wax isku mid ah ayaa la shaqeeya kordhinta beenta ah. Wac 800-555-5555 x3542. Ma jiraan wax kordhin ah 3542 laakiin waxay kuu sheegaysaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato.
Jul 12, 2010 markay ahayd 10:34 AM
Waxaan ku sameyn jirnay si la mid ah Boostada Tooska ah, Patric! Waxaan ku saxiixan jirnay waraaqaha magac been abuur ah iyo cinwaan - ka dibna waxaan u adeegsan jirnay si aan ula socono ololaha una soo bandhigno. Maalmahan daahfurnaanta loo baahan yahay, waxaan hubaa in dhaqanka caadiga ah aan lagu mahadin doonin wax badan hadda.
Jul 14, 2010 markay ahayd 10:33 AM
Post weyn Doug. Waxaan shaqaalaynay kala duwanaanshaha habkan: http://www.seoverflow.com/blog/call-tracking/roll-your-own-phone-call-tracking-program-it-is-easy/
cabbaar. Waa xeelad weyn waxayna kaa caawineysaa inaad si fudud ugu caddeyso qiimaha macaamiishaada. Waxay mudan tahay in la hubiyo qoraalkaas iyo Twilio kuwa shaqaalaysiiya kaligood.